DEG DEG: Xildhibaanada Jubbaland & Puntland ayey taageeri doonaan doorashada maanta ka dhacaysa Muqdisho? | PuntlandTimes-	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
DEG DEG: Xildhibaanada Jubbaland & Puntland ayey taageeri doonaan doorashada maanta ka dhacaysa Muqdisho?
MUQDISHO(P-TIMES)- Doorasho xasaasi ah ayaa goor dhaw ka bilaabanaysa Xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho, taas oo lagu dooran doono Gudoomiye kuxigeenada baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya, xili ay tartamayaan Musharaxiin ay kala wataan dawlad gobaleedyada dalka iyo Madaxtooyada Soomaaliya oo markale tijaabin doonto awoodeeda baarlamaanka Faderaalka ee lasoo dhisay.
Wararkii ugu dambeeyey oo uu Warsidaha Puntlandtimes.com ka helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Xildhibaanada ka soo jeeda Beesha Daarood ee laga soo doortay Jubbaland & Puntland ay codkooda saaka ku taageeri doonaan mid kamid ah musharaxiinta u taagan gudoomiye kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka Faderaalka.
Qaar kamid ah Xildhibaanada ayaa sheegay in ay xooga saarayaan sidii Abdiweli Sh Ibraahim Muudey uu u noqon lahaa Gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya, waxayna sheegeen in ay qaarkood talaabadaasi ka dhigan tahay Isbedel ku yimaada hanaanka baarlamaanka.
Warar cusub waxay sheegayaan in ay dhici karaan xubno kamid ah Xildhibaanada baarlamaanka Faderaalka ee ka soo jeeda Beeshan oo qaarkod ka soo horjeeda Ciid, isla markaasna taageeraya Musharax Faarax Cabdulqaadir Maxamed.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la rumeysan yahay in ay codad badan ku dhex leedahay mudanayaasha laga soo doortay labadan dawlad gobaleed, waxaana guul uu maanta gaaro Faarax Cabdulqaadir ay uga dhigan tahay Soomaaliya markale iyo Madaxtinimada oo ay hayaan Madaxda hadda xilalka haysa.
SI TOOS AH DOORASHADA UGA DAAWO RIIX HALKAAN